Somaliland oo haamo waawayn u culanaysa shidaalka geeska Afrika - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, MUUSE BIIXI
"Saddex shirkadood ayaa shidaal qodis ka wada Somaliland dhammaantoodna rajo ayaa laga qabaa in ay shidaal heli doonaan" ayuu yiri Maxamed.
"Maadaama oon meel dhexe ku naalo waa meel la keeni karo shidaallada bari iyo galbeed ka soo baxa ka dibna lagu sifayn karo oo Afrika oo dhan halkaas laga gaarsiin karo" ayuu intaas ku sii daray wasiirka.
Mas'uuliyiinta Somaliland oo faahfaahin ka bixiyay booqashada wafdi ka socday Eretariya
"Waddankan aan jaarka nahay ee Itoobiya ayay shirkadaha oo dhan tartan ugu jiraan" ayuu yiri wasiir Maxamed oo ku baraarugsan ahmiyadda suuqa 100 milyan ee ruux ee ku nool dalka Itoobiya oon bad lahayn.
"Wallaahay waan ku faraxnay"
Mashruucan warshadda shidaalka sifaysa oo lagu wado in uu noqdo mid baaxad wayn ayaa loo arkaa in uu wax wayn ka qaban doono mashaakilka Jamhuuriyadda Iskeed ugu Dhawaaqday Madaxbannaanida ka haysta shaqo la'aanta baahsan ee dhallinyarada.
Dhawaan ayuu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Billaabay "qorshe qaran" oo Somaliland ay tabobar iyo shaqo abuur ugu samaynayso dhallinyarada jaamacadaha ka baxday kuwaas difcaddii ugu horraysay la xareeyay.
"Qorshahaas ay shirkadda shidaal sifayntu shaqo abuurka ugu samaynayso wallaahay waan ku faraxnay waana soo dhawaynaynaa waayo dadkani waa dad dhallinyaro ah oo ku yimid mashruuca shaqo qaran, marka dhallinyaradan oo shaqo la'aan ah jaamacadana ka soo baxay aad bay u soo dhaweeyeen" ayuu yiri Faysal Cabdi Muxumed oo ka mid ah difcada koobaad ee shaqada loo ballamiyay.
"Walaal kuwii hore waxay ahaan jireen isfaham shirkado lala galay oo warbaahinta gaaray, balse kan waa heshiis." waana la dhagax dhigay ayuu yiri Cawad.